UNHCR contributes 50,000 additional test kits in support of Myanmar’s COVID-19 pandemic response (scroll down for Myanmar version) | United Nations in Myanmar
UNHCR contributes 50,000 additional test kits in support of Myanmar’s COVID-19 pandemic response (scroll down for Myanmar version)
UNHCR Representative Ms. Hai Kyung Jun (left) presents the donation of COVID-19 test kits to Union Health Minister Dr. Myint Htwe (right).
YANGON, Myanmar – As the COVID-19 pandemic continues to affect the lives of millions across Myanmar, UNHCR, the UN Refugee Agency, is expanding its support to the Government of Myanmar's national response.
“UNHCR continues to support the Government’s nationwide efforts to contain the COVID-19 pandemic and ensure that vulnerable communities are not left out”, said UNHCR Representative in Myanmar Ms. Hai Kyung Jun.
UNHCR has also stepped-up campaigns to raise awareness on COVID-19 prevention in camps and sites for internally displaced people and stateless persons, as well as health, water, sanitation and hygiene services in these locations by installing new water points and distributing hygiene items such as soap and hand sanitizer.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါအပေါ်တုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုကို UNHCR မှပံ့ပိုးကူညီရန် စမ်းသပ်ကိရိယာ ၅၀,၀၀၀ ထပ်ဆောင်း လှုဒါန်းပေးအပ်ခြင်း
ရန်ကုန်၊ မြန်မာ - COVID-19 ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကပ်ရောဂါသည် မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်းရှိ သန်းပေါင်းများစွာသော ပြည်သူတို့၏ဘ၀အပေါ် ဆက်လက်သက်ရောက်နေသဖြင့် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ (UNHCR)သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ၏ အမျိုးသားအဆင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်မှုအပေါ် တိုးမြှင့် ကူညီဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီသည် နေပြည်တော်ရှိ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနသို့ Cobas SARS-CoV-2 Polymerase Chain Reaction (PCR) စမ်းသပ်ကိရိယာ ၅၀,၀၀၀ ကို လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ယခုလှုဒါန်းသည့်စမ်းသပ်ကိရိယာများသည် UNHCR နှင့် WFP တို့မှ ဇူလိုင်လအတွင်းလှုဒါန်းခဲ့သည့် စမ်းသပ် ကိရိယာ၂၀,၀၀၀အပြင် ထပ်ဆောင်းလှုဒါန်းခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ လက်ရှိကာလအချိန်အထိ စုစုပေါင်းအားဖြင့် စမ်းသပ်ကိရိယာပေါင်း ၁၄၅,၀၀၀ကျော်ကိုကုလသမဂ္ဂ၏ပူးပေါင်းတုံ့ပြန်မှုဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရထံသို့လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။
“UNHCRအနေဖြင့် COVID-19ရောဂါကူးစက်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်း အတာဖြင့် ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးရန်နှင့် ထိခိုက်လွယ်သောလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများကို ချန်လှပ် ထားခြင်းမရှိစေရန်အတွက်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးရုံး ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Ms. Hai Kyung Jun ကပြောကြားခဲ့သည်။
ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီသည် လက်ရှိအချိန်အထိ စောင့်ကြည့်ရေးစခန်းပေါင်း၄၀၀ကျော်သို့ အခြေခံအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် အိပ်ယာများ၊ စောင်များ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် တစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသုံးပစ္စည်းများဖြည့်ဆည်းပေးခြင်းနှင့် လက်အိပ်များ၊ နှာခေါင်းစည်းများ၊ တစ်ခါသုံး ၀တ်စုံများနှင့် မျက်နှာဖုံးစွပ်များအပါအ၀င် တစ်ကိုယ်ရည်သုံးရောဂါကာကွယ်ရေး၀တ်စုံ ၆၈၅,၂၀၀စုံအား ရှေ့တန်းမျက်နှာစာမှတာ၀န်ယူဆောင်ရွက်နေကြသည့်ကျန်းမာရေး၀န်ထမ်းများနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော လူမှု အသိုက်အ၀န်းများသို့ ဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ နောက်ထပ်အစီအစဥ်အနေဖြင့် N95နှာခေါင်းစည်း ၃၆၇,၀၀၀သည် ယခုနှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် ထပ်မံရောက်ရှိနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ရပြီး သက်ဆိုင်ရာ၀န်ကြီးဌာနများသို့ ဖြန့်ဝေပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
UNHCR သည် နေရပ်စွန့်ခွာစခန်းများနှင့် နေရပ်စွန့်ခွာပြည်သူများနှင့်နိုင်ငံမဲ့သူများနေထိုင်ရာနေရာများတွင် COVID-19 ကာကွယ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်အသိပညာမြှင့်တင်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ တိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပြီး၊ အလားတူစွာ ယင်းနေရာများတွင် ကျန်းမာရေး၊ ရေနှင့်သန့်ရှင်းရေး နှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးဆိုင်ရာအကူအညီများရရှိနိုင်စေရန် ရေရရှိရာနေရာသစ်များဖော်ဆောင်ပေးခြင်းနှင့် တစ်ကိုယ်ရည် သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဆပ်ပြာနှင့်လက်သန့်ဆေးရည်များပေး‌ဝေခြင်းတို့ကို လုပ်ဆောင်လျက် ရှိပါသည်။
အကူအညီလိုအပ်သူများအတွက် အရေးပါသည့်အကူအညီများပံ့ပိုးကူညီပေးရန် အစိုးရ၊ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ၊ အခြားကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းများနှင့် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှု ဆိုင်ရာ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ၏စုပေါင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုကြောင့် ယနေ့လက်ရှိအချိန်အထိ ကချင်၊ ရခိုင်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်များအပြင် မြန်မာနိုင်ငံအရှေ့တောင်ပိုင်းဒေသရှိ လူပေါင်း ၆၇၀,၀၀၀ကျော် အကျိုးခံစားခဲ့ရပြီဖြစ်ပါသည်။
UNHCR ၏ COVID-19 တုန့်ပြန်မှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါက ဤနေရာတွင် ဖတ်ရှုပါ။